Sanatar Xuseen: Xaalad Deg Deg ah waxaa ka dhalan karta in leysku maxkamadeeyo – Kalfadhi
Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud ayaa ku tilmaamay mid aan sababeysneyn waqtigaan wuxuu ugu yeeray “Xaalad Deg Deg ah” oo uu sheegay in lagu soo rogay Muqdisho. Duqa Muqdisho, Injineer Cabduraxmaan Yariisow, ayaa sheegay in, si loo adkeeyo amaanka caasimadda, la xiri doono wadooyin fara badan, taas oo ay dad badan ku fasireen in Xamar Xaalad Deg Deg ah lagu rogay, dabcanna uu warka Sanatar Xuseen u muuqdo inuu yahay mid warkaas ka jawaabay. Hadalka Sanatarka, oo uu ku soo qoray Facebook-giisa, ayaa sidan u dhignaa:-
Xaalad Deg Deg ah! Waxaan maqlayaa in Magaalada Muqdishu lagu soo rogey Xaalad deg deg ah.
Haddaba, goormaa la soo rogi karaa, yaase ku dhawaaqi kara “Xaalad Deg Deg ah”? Habraac noocee ah ayaa loo maraa? Yaa ansixinaya? Muddo intee la eg ayay socon kartaa? Maxaa ka ratibmaya ama ka dhalanaya Xaaladda Deg deg ah?
Sida uu qabo qodobka 131-aad, faqradaha 1-aad ilaa 7-aad ee Dastuurka KMG, Xaalad Deg Deg ah waxaa wadanka ama qayb ka mid ah lagu soo rogi karaa keliya haddii ay dhacdo xaalad ba’an oo dagaal, weerar ama musiibo, ayadoo loo marayo habraac gaar ah. Habraacaas waxaa uu yahay in Golaha Wasiirada soojeediyaan, Madaxweynahana uu Labada Gole ee Baarlamaanka ka codsado inay ka doodaan ayna ku ansixiyaan muddo 21 maalmood gudohood ah, xaaladdaas waxaa la ogol yahay inay socoto ugu badnaan lix bilood.
Ku dhawaaqista xaalad deg deg ah waxaa ay Laanta Fulinta siinaysaa awoodo dheeri ah, oo wax looga qabto xaaladda taagan. Balse, awoodahaas looguma xadgudbi karo xuquuqaadka dastuuriga ah. Waxaa haddaba igu taagan dhowr su’aalood oo ku aadan xaaladdan la sheegay. Su’aasha koowaad waxaa ay tahay Xaalad deg deg ah waxaa loo sameeyaa Xaalad cusub.
Maxaa hadda ku soo beegay, anagoo og in dhowr sano ay dhibaatadan socotey? DUQ Magaalo-se ma ku dhawaaqi karaa Xaalad Deg Deg ah? Sidoo kale habraacii, uu dastuurku sheegay, ma loo maray? Muqdishu soo horeyba Xaalad Deg Deg ah uguma jirin. Dhibaatada hadda ay shacabku qabaan miyaa mid kale loogu dari karaa?
Arrintan waxay u eg tahay mid lagu abuurayo dhibaatooyin hor leh, oo saameynaya shacabka horeyba u dhibaateysnaa. Waxaanse xasuusinayaa Madaxda Fulinta in ku dhawaaqista Xaalad Deg Deg ah, oo aan loo marin habraaca saxda ah, ay ka dhalan karto in la isku maxkamadeeyo!
Sanatar Xuseen Sheekh Maxamuud